Indlela ukuguqula AVI imiqophi ku-Quicktime Mov on Mac OS
Guide & Amathiphu mayelana Multimedia
Menyu bese amawijethi
Umsuka Amadivayisi Android
Amathiphu & Namaqhinga
Abangane on Facebook!
Nendlela Vumela USB lokulungisa inkinga kudivayisi yakho Android
Indlela Phinda Isuse Amanothi kusuka ku-iPhone
Idlalwa kanjani Blu-ray Movies on Xbox 360
Nendlela Phinda iMessages Deleted on iPhone / iPad / iPod
Indlela Phinda Imilayezo ususiwe kusuka Samsung Galaxy S5 / S6
Mhlawumbe nawe ube amathani lwamafayela AVI kwi-hard disk, noma kusuke digicam, noma ilandelwe kusukela internet. Ngeshwa, Apple kuphela kufeza la ifayela AVI: “Motion JPEG (M-JPEG) kuze kufinyelele 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 ozimele ngomzuzwana, ezilalelwayo in ULAW, PCM stereo audio in. Avi ifayela yohlelo”. Ngakho uma amafayela AVI yakho evamile okuningi nangokwengeziwe ifayela AVI lwendzawo, okubhalwe nge DivX, XviD, njll, Yikuphi Quicktime akakwazi bona, ke kuyodingeka ukuguqula i-AVI video amafayela Mov noma ezinye amafomethi ehambisanayo.
Uma une Quicktime Pro efakiwe, ungangena ukuguqula AVI kuya Mov Mac ngqo. Nje khetha Mov njengoba inani yohlelo ngokukhetha “Save njengoba”. Uma ungenalo Quicktime Pro noma ngisho freska Pro abakwazi ukuguqula i-AVI noma ngempumelelo, ungasebenzisa lokhu ukusetshenziswa kalula professional Video Converter Ultimate for Mac ukuze benze msebenzi. Lolu hlelo lokusebenza Mac ikuvumela ukuguqula noma iyiphi ividiyo noma ezilalelwayo kuzo zonke izakhiwo athandwayo kalula.
Step 1: Layisha amafayela AVI singene Mac Imiqophi Converter
Ngokuqondile udonse & uphonsa amafayela AVI kuya Converter Ukugunda for Mac. Noma ungathumela baye “Ifayela” menu, khetha “Engeza amafayela Imiqophi” ukungenisa amafayela AVI.
Step 2: Khetha “Ukudla” njengoba inani yohlelo
Khetha ifomethi Mov kusukela format ohlwini lohlu olwehlisiwe njengoba inani yohlelo.
Step 3: Qala ukuguqula AVI kuya Mov for Mac
Chofoza le “Ukuguqula” Inkinobho, kanye Mac Isiqophi Converter uyokwenza umsebenzi aphumule ngawe. Lapho ukuguqulwa kwenziwa, ungakwazi ukudlala umkhiqizo Mov imiqophi in Quicktime, hlela kwabo iMovie, Final Cut Pro, noma wazigqokisa iPod yakho, iPad ukudlala noma nini wena uthanda.
Indlela ukuguqula i-DVD ukuze MP4 yohlelo
Idlalwa kanjani MKV Amafayela on Xbox 360
Indlela ukuguqula FLV/F4V kuya MP4 mahhala on Win / Mac
Indlela ukungenisa MTS/M2TS Amafayela kuya Final Cut Pro mahhala on Mac
Idlalwa kanjani WMV imiqophi on Mac OS X
Posted on December 2, 2012 May 9, 2015 Umbhali Izigaba Video / Audio SolutionAmathegi AVI ukuze Mov Converter for Mac, ukuguqula avi ukuze Mov on Mac
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuguqula Blu-ray movie ku-Nexus 10
Next post Next: Isixazululo Easy of Ukufaka AVI kuya iMovie